IiRocket Rockets - Ikkaro
yokuqalisa >> Iingcaphephe zaseKhaya >> Iirokethi zamanzi
Irokethi yamanzi Yirokethi elula eyenziwe ekhaya esekwe kumgaqo wesenzo kunye nokuphendula. Ukusebenza kwayo kubandakanya kuphela ukubeka umoya kwibhotile yeplastiki enamanzi kwaye xa uxinzelelo luphakama kakhulu irokethi iya kuqhutywa yijethi yamanzi anyanzelekileyo.
Into ebonakala ngathi ngumdaka okanye into yokudlala elula ebantwaneni ineziphumo ezikhulu kakhulu, kuba oko kuye kwenzeka imijukujelwa yamanzi ngaphezu kweemitha ezingama-500 ukuphakama. Ngokuqinisekileyo uya unomdla ngakumbi kulo mbandela.
Ngokomgaqo le nto yayiza kuba sisithuba, kodwa ndifumene ulwazi oluninzi malunga IiRocket Rockets o Iirokethi zamanzi Ndithathe isigqibo sokuyiguqula ibe licandelo. Ngale ndlela sinokuqokelela ulwazi ngakumbi.
Kwiintsuku ezimbalwa ezizayo siza kuthumela ulwazi.
Iirocket rockets eziphindwe kabini
Ngamaxesha athile siye sathetha ngawo imijukujelwa yamanzi. Kodwa into esiyishiya namhlanje ngumsebenzi wobunjineli beenqwelo moya.
Yirocket rocket enezigaba ezibini, efikelela kwiimitha ezingama-250 ukuphakama; iyamangalisa.
Umfanekiso we irokethi ukuze ufumane umbono wento esithetha ngayo.
Ewe; ziibhotile zamanzi :)
Uyakha njani irokethi yamanzi
Makhe sithethe ngayo indlela yokwenza irokethi yamanzi. Umgaqo wokusebenza ulula kakhulu, usebenza ngu Umgaqo wesenzo-impendulo ngenxa yomoya ungeniswe ebhotileni.
Kuba ongazange ave irokethi yamanzi, yibhotile yeplastiki, ezaliswe ngokuyinxenye ngamanzi, apho kungeniswa umoya oxinzelelweyo emva koko uyiyeke iphume ngomngxunya wokuphuma ize iqhubele ibhotile.
Ukususela ngoku ukuya phambili, uhlengahlengiso alunasiphelo, kwincam ye rokethi, amaphiko, isiphekepheke, indawo yokuphuma okanye ubume kunye nobungakanani bomoya ojoyiweyo.